Thursday 3rd October 2019 18:07:04 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Fartii hore ee ay isticmaali jireen Masaaridii hore waxa lagu magacaabay; "Hieroglyphic.” Magacaas oo ka soo jeeda Afka Giriigga oo la micno ah; "Fartii Barakaysnayd – The Sacred Writing.” Haddaba, Khawaajiyaashu waxay daah-fureen fartaas sawirka ah. Waxa libta daah-furka fartaas la siiyey oo loo aqoonsaday inuu horseeday aqoonyahan Faransiis ah oo la odhan jiray Shambiloon (Champollion) taariikhdu markii ay ahayd sannadkii 1822kii, iyaga oo dadka Carabta ah ee Masar ku noolaa ay fartaas u yiqiineen; "Sixir.”
Ø Magacyada waxyaabihii shirkiga ahaa ee ay caabudi jireen ee ay Ilaahyada u yaqaaneen
Ø Magacyada Boqoradoodii iyo
Ø Guud ahaan nolosha ay ku noolaayeen Masaaridii hore
Ø Dhinaca Galbeedka Afrika,
Ø Dhinaca Bariga Afrika
Xeeldheere Allan Gardiner oo qoray naxwaha afkii hore ee Masaaridda waxa uu yidhi; "Sawirka A loo qaatay waxa uu ahaa shibbane fudud oo lumay. Taas oo ah ma aha sawirku A.” Haseyeeshee, ma sheegin shibbanaha lumay waxa uu ahaa.
Dadkii hore ee Reer Masar iyo Reer Ciraaq (Sumeria) labada ilbaxnimo ee ugu da'weyn aataarta iyo taariikhda ee la yaqaan oo 5000 (shan kun) oo sanno ku simman. Waxa Haadka loo yiqiin inuu dadka marka ay dhintaan uu nafta qaado oo duni kale geeyo.
Aataar dhowaan laga helay Turkiga oo lagu qiyaasay inay jiray 10,000 (toban kun) oo sanno oo laba da'weyn ilbaxnimadii hore uu soo sheegnay, ayaa iyana lagu arkay sawirrada haadka, meeshaas oo loo maleeyey xabaalo-wadareed.
Soomaalidu marka ay arkaan haad dhacaya (haad duulaya) waxay u qaateen in geeri ama meyd uu meesha jiro. Haddii guri uu Haad dul dego waxa loo yidhaahdaa; "Geeri ayuu sheegayaa.” Ereyga Haad waxa uu ka soo jeedaa had oo ah geeri. Maxaa kuu baxday Boowe. Haad micnahiisu waa; "Geeri.”
Ø AB = (heart) wadne iyo
Ø BA = (good soul) nafta karaamada leh.
Abdiyaw habi laawe lo'daadan harraadan……
bal eeg weedhan’ "Bahdii ayaa laga qaaday sidii loo dhibayey.” Karaamadii ayaa laga qaaday ama naftii fiicnayd ahaa laga dilay. Waxa kale oo jira ereyga waa la bah-dilay oo ah karaamadii ayaa laga qaaday. Ereygan Carabta ayaa ergisatay.
[War Hadda Soo Dhacay:-] Wafti Ka Socda Beesha Caalamka Oo Hargeysa Ku Sugan & Xaaladihii Ugu Dambeeyay Oo Meel Xasa
[Daawo:-] "Xasuuqii Somaliland Sax Buu Aha Hadana Waa In Tallaabo Militari Laga Qaado" Ra'iisul-wasaarihii